Awareness, Museum, Photography and Zimbabwe - Nonprofit Technology
Using Photography to Change the World: An Interview with Paola Gianturco
A high school English teacher in Zimbabwe, whose name is Betty Makoni , began hearing stories from her students after school, that they had been raped. The children are ages 6-16, and they're making huge strides by leading a national movement against child rape in Zimbabwe. The little girls are part of a culture, the Shona culture in Zimbabwe, as maybe you know, uses poetry. There are no men in Zimbabwe who are immune to these girls' attention. MORE
Photography Zimbabwe Bolivia Interview 40
Awareness Museum Photography Zimbabwe
A high school English teacher in Zimbabwe, whose name is Betty Makoni , began hearing stories from her students after school, that they had been raped. The children are ages 6-16, and they're making huge strides by leading a national movement against child rape in Zimbabwe. The little girls are part of a culture, the Shona culture in Zimbabwe, as maybe you know, uses poetry. There are no men in Zimbabwe who are immune to these girls' attention.